Newcastle United iyo Stoke Ciy oo Bareejo Ku Kala Baxay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Newcastle United iyo Stoke Ciy oo Bareejo Ku Kala Baxay “SAWIRRO”
Kooxda Newcastle United ayaa galaba garoonkeeda St James´ Park barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Stoke City.
Labada kooxood ayaana wax gool ah iska dhalin qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jack Colback ayaa daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Ciyaaryahan Peter Crouch oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Stoke City.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta tobanaad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda Newcastle United ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 31-dhibcood.
Kooxaha Roma,Napoli,Fiorentina iyo Empoli oo Guulo Gaaray
Raggii weerarka Boosaaso fuliyay oo qaarkood saxaafadda loo soo bandhigay “SAWIRRO”